समय नपुगी र समय पुगेर जन्मने शिशुमा देखिने स्वास्थ्य समस्या र समाधान ! – JanaSanchar.com
समय नपुगी र समय पुगेर जन्मने शिशुमा देखिने स्वास्थ्य समस्या र समाधान !
संबाददाता : सागर गिरी	प्रकाशित मिति: (२०७६ बैशाख ७, शनिबार) १३:५५
जन्मेदेखि एक महिनासम्मको बच्चालाई नवजात शिशु भनिन्छ। बच्चा जन्मिन ३७ हप्ता पुग्नुपर्ने भए पनि कुनैकुनै बच्चा समय नपुगी जन्मिन्छन्। ३७ हप्ता नपुग्दै जन्मिएका बच्चालाई समय नपुगी जन्मिएको भनिन्छ। आमाको गर्भबाट भर्खर बाहिर निस्केको हुनाले यस्ता बच्चामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ र विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गर्छ।
समय नपुगी जन्मने शिशुमा देखिने स्वास्थ्य समस्या !
३४ हप्ताभन्दा पहिले नै जन्मिएका बच्चा अन्य समय पुगेर जन्मिएका बच्चाको तुलनामा निकै कमजोर हुन्छन्। समय पुगेर जन्मिएका बच्चामा भन्दा संक्रमण छिटो हुन्छ। यस्ता बच्चामा दूध नचुस्ने, दिसा–पिसाब गर्न नसक्ने र मुटुमा पनि विभिन्न समस्या देखिन सक्छन्। निमोनिया बढी मात्रमा हुने गर्छ र तौल बढ्न समय लाग्छ। समय नपुगी जन्मिएका बच्चालाई उचित स्याहार गर्न सकिएन भने बचाउन निकै गाह्रो हुन्छ। स्याहार गरिएन भने ठूलो भएपछि उनीहरुको शारीरिक र मानसिक विकास राम्रोसँग हुँदैन।
समय पुगेर जन्मिने शिशुमा देखिने स्वास्थ्य समस्या !
३७ देखि ४० हप्ताभित्र जन्मिएका १ सय जना बच्चामध्ये १० जनामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ भने एक जनामा जटिल समस्या देखीन सक्छ। जस्तैः बच्चा जन्मिनासाथ नरुनु। अक्सिजनको कमी भयो भने जन्मिनसाथ बच्चा रुँदैनन्। समयमा नै ख्याल गरिएन भने पछि लुलो हुने सम्भावना हुन्छ। बच्चालाई चिसोले छिटो समात्ने हुँदा निमोनियाले सताउन सक्छ।
नवजात शिशुमा देखिने अर्को समस्या भनेको जन्डिस हो। यदि जन्डिस टाउकोमा पुग्यो भने बच्चाको मानसिक विकासमा अवरोध आउँछ। त्यसैले तुरुन्तै चिकित्सकको परामर्श लिएर जन्डिसको उपचार गर्नुपर्छ।
समय पुगेर जन्मिएका बच्चामा ज्वरो आउने, सितांग हुने, दूध नचुस्ने, वान्ता गर्ने, छिटोछिटो श्वास फेर्ने, सुस्त हुने, कम्पन आउने,कान पाक्ने, नाइटो वरिपरि पाक्ने, छाला रातो हुने, हातखुट्टा पहेँलो देखिने, दिसा–पिसाब नगर्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। यस्ता समस्या देखिएमा तुरुन्त चिकित्सकसँग प्ररामर्श गर्नुपर्छ।
जन्मजात लिएर आउने समस्या जस्तैः मुटुमा प्वाल पर्ने, मुटु, आन्द्रा र दिसा गर्ने ठाउँको विकास नहुने भयो भने बच्चालाई एनआसियूमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ।
– बच्चा गर्भमा आएपछि नियमित गर्भ जाँच गर्ने र चिकित्सकले दिएको आइरनचक्की नियमीत खाने।
– स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने
– बच्चा जन्मिएको एक घन्टाभित्र आमाको दूध चुसाउने
– नियमित खोप लगाउने
– धुलो, धुुवाँ, चिसोबाट बचाउने र बच्चालाई सफा सुग्घर बनाएर राख्ने
– जन्मिएको पहिलो ६ महिना आमाको दूध मात्र खुवाउने
– बच्चालाई छिटो चिसोले समात्ने हुँदा न्यानो गरेर राख्ने तर नगुम्स्याउने
– बच्चालाई छुनुभन्दा पहिला हात–खुट्टा राम्रोसँग सफा गर्ने
(२०७६ बैशाख ७, शनिबार) १३:५५ मा प्रकाशित